Nilaina ny Mpitory Maro Kokoa | Diary 2015
Nitoriana ny vaovao tsara ny faritra mitokana
Nihamaro ihany ny misionera. Anisan’izany ry Amos sy Barbara Parker ary Pete Paschal. Teo koa ry Richard sy Belva Stoddard, izay nanompo tany Bolivia, ary Jesse sy Lynn Cantwell, avy any Kolombia. Vao mainka nampandroso ny asa fitoriana ireo misionera ireo. Efa masaka ny faritany teny an-tanàn-dehibe, tamin’ny 1973. Mbola tsy nitoriana ny vaovao tsara kosa ny faritra mitokana. Natao àry ny fandaharana mba hitoriana tany ambanivohitra. Rehefa nilazana ny mpitory raha misy vonona hitory any ambanivohitra mandritra ny roa volana, dia mpisava lalana maharitra 19 no nanolo-tena. Betsaka ny mpisava lalana voatendry hanompo tany amin’ireo toerana mbola tsy nitoriana mihitsy na zara raha nitoriana, teo anelanelan’ny Desambra 1973 sy Janoary 1977.
“Matetika no natakalonay akoho na atody na voankazo ny boky sy gazety”
Hoy ny iray tamin’izy ireo: “Nitory sy nametraka gazety izahay ny andro anankiray, dia nitsidika ny olona liana ny ampitson’iny. Tsy dia nanam-bola ny olona tany, ka matetika no natakalonay akoho na atody na voankazo ny boky sy gazety. Tsy namela anay ho mosarena mihitsy i Jehovah.” Maro no sambany vao nandre izay voalazan’ny Baiboly. Nolazain’ny mpitondra fivavahana tamin’ny olona fa i Jehovah ihany no Devoly. Akory ny hagagan’izy ireo rehefa novakina taminy ilay Salamo 83:18 hoe: “Ianao irery ihany, izay manana anarana hoe Jehovah, no Avo Indrindra ambonin’ny tany manontolo.” Tany amin’ny toerana sasany aza nasiana fivoriana ho an’ny besinimaro mihitsy, satria be dia be ny olona liana.
Nihamaro ny misionera ary nilaina ny sampana vaovao
Tonga teto i Abigail Pérez sy Georgina vadiny, tamin’ny Septambra 1979. Misionera izy ireo ary nasaina nanao ny asan’ny faritra. Tamin’ny 1987 kosa no tonga ry Tom sy Shirley Dean, izay nahazo diplaoma tamin’ny Sekolin’i Gileada. Ry Reiner sy Jeanne Thompson indray tonga tamin’ny Aogositra 1988. Teto no tany fahadimy nanendrena azy ireo. Nitondra ny anjara birikiny koa anefa ireo mpanompo manontolo andro manokana avy tany Porto Rico.
Tafakatra 11 081 ny isan’ny mpitory tamin’ny 1989. Mbola nantenaina hitombo izany, satria nisy 20 494 ny fampianarana Baiboly. Nisy ihany anefa ny olana. Tsy ampy nisahanana ny asa intsony, ohatra, ny tranon’ny sampana fa kely loatra. Hoy i Reiner Thompson: “Feno hipoka ilay izy, ka tsy maintsy nitady trano hafa hipetrahan’ny Betelita izahay, ary nitady trano fanatobiana entana tany an-toeran-kafa.”
Hoy ihany i Reiner: “Tena sarotra ny nahita tany azo nanorenana biraon’ny sampana vaovao. Indray andro, nisy mpandraharaha niantso anay, rehefa henony hoe nitady tany izahay. Te hivarotra ny taniny tsara indrindra, hono, izy, saingy amin’ny Vavolombelon’i Jehovah ihany. Nanana orinasa fanjairana izy taloha, ary Vavolombelon’i Jehovah ny sekreterany sy ny mpiasany maromaro. Hitany, nandritra ny taona maro, hoe manao ny marina sy manaja olona ireo mpiasa ireo. Tena nampiaiky volana azy izany. Hitany hoe miavaka ny Vavolombelon’i Jehovah, ka namidiny mora be ilay tany.” Azo tamin’ny Desambra 1988 izy io, ary azo koa ny tany telo teo akaiky teo tatỳ aoriana. Mirefy valo hektara mahery ny toerana misy ny biraon’ny sampana sy ilay Efitrano Fivoriambe eo akaiky eo.
Mpiasa an-tsitrapo an-jatony avy teto an-toerana sy avy tany ivelany no niara-nifarimbona tamin’ny fanorenana an’ilay biraon’ny sampana vaovao sy ilay Efitrano Fivoriambe. Notokanana tamin’ny Novambra 1996 izy ireo, ka nandray anjara tamin’ny fandaharana ny asabotsy i Carey Barber sy Theodore Jaracz ary Gerrit Lösch, izay samy anisan’ny Filan-kevi-pitantanana. Nisy fandaharana manokana ny ampitson’iny, tao amin’ireo kianja roa anisan’ny lehibe indrindra eto amin’ny Repoblika Dominikanina. Vahiny 10 000 mahery no nitsidika an’ireo tranon’ny sampana vaovao.
‘Niampita nanketo Makedonia’
Toa tsy ho hay ny tsy hiresaka momba an’ireo Vavolombelona avy any an-tany hafa, rehefa mitantara ny asa fitoriana teto. Henony hoe mamokatra be ny saha eto, satria afaka mitarika fampianarana Baiboly be dia be ny mpitory anankiray. Maro àry no tonga nanitatra teto, taloha kelin’ny 1990, ka toy ny hoe ‘niampita nanketo Makedonia.’ (Asa. 16:9) Mbola notantarainy tamin’ny hafa koa hoe mahafinaritra be ny asa fijinjana atỳ, ka vao mainka nitombo ny olona nifindra teto taorian’ny 1990.
Anisan’izy ireny i Stevan sy Miriam Norager, avy any Danemark. Efa hatramin’ny 2001 izy ireo no nanompo teto. Efa nanompo teto herintaona sy tapany i Miriam sy ny zokiny vavy, talohan’izay. Fa inona no nahatonga azy mivady hifindra lavitra toy izany, nefa ny kolontsaina sy ny fitenin’ny olona eto aza tsy mitovy amin’ny azy? Hoy i Miriam: “Samy avy amin’ny fianakaviana tia an’i Jehovah izahay. Mpisava lalana manokana ny ray aman-dreninay tamin’izy ireo mbola tanora, ary mbola mpisava lalana maharitra izy ireo rehefa nanan-janaka. Nampirisihiny izahay mba hanome an’i Jehovah an’izay rehetra anananay, ka hanompo manontolo andro.”
Voatendry ho mpisava lalana manokana i Stevan sy Miriam tamin’ny 2006, ary olona maro no nampiany hahalala ny fahamarinana. Hoy i Stevan: “Tsy ho voatanisa ny fitahiana azonay. Tsy misy dikany ny aretina na ny olana hafa natrehinay, raha ampitahaina amin’ny zavatra nahafinaritra anay tatỳ, sy ny fifaliana tsapanay rehefa manampy olona hahalala an’i Jehovah sy ho tia azy. Nahazo namana be fitiavana maro be koa izahay. Lasa nahay nanetry tena sy nanam-paharetana izahay rehefa nanompo tatỳ amin’ny Repoblika Dominikanina. Nihanatanjaka koa ny finoanay ary lasa niantehitra kokoa tamin’i Jehovah izahay, rehefa nanatsotra fiainana.”
Efa 20 taona mahery i Jennifer Joy no nanompo teto, ary mitory amin’ny marenina izy
Maro ny anabavy mpitovo vahiny manompo eto, ka anisan’izany i Jennifer Joy. Nitsidika an’i Edith White no nahatongavany teto, tamin’ny 1992. Nenitoany izy io, ary misionera efa ela. Nahita vokatra i Jennifer tamin’izany, rehefa nanompo. Betsaka koa ny anabavy vahiny mpanitatra faritany nihaona taminy. Hoy i Jennifer: “Saro-kenatra aho tamin’izany sady tsy natoky tena. Nieritreritra anefa aho hoe ‘vitan-dry zareo ve tsy ho vitako!’”
Ny hijanona herintaona ihany no tanjon’i Jennifer, tamin’ny voalohany. Nivadika teny anefa ny taona, fa mbola io ihany izy. Efa 20 taona mahery izy izao no nanompo teto. Maro no efa nampiany ho lasa mpanompon’i Jehovah. Nanampy tamin’ny fitoriana amin’ny tenin’ny tanana koa i Jennifer, ary nandray anjara tamin’ny fanomanana an’ireo lesona hampiasaina amin’ny kilasy fianarana tenin’ny tanana.
‘Nikarakara ahy foana i Jehovah hatramin’izao, ka matoky aho hoe mbola hanao toy izany koa izy amin’ny herintaona’
Ahoana no ahitan’i Jennifer vola hivelomana? Hoy izy: “Mankany Kanada aho isan-taona, ary miasa any mandritra ny volana vitsivitsy. Betsaka ny asa efa nataoko, ohatra hoe maka sary, mandoko trano, manadio birao, manamboatra jirona fiarakodia, manao môkety, mitondra mpizaha tany, mikarakara olona hanao dia lavitra, mampianatra teny anglisy, ary mandika teny.” Ohariny amin’ny fiainan’ny Israelita tany an-tany efitra ny fiainany. Hoy izy: “Velona izy ireo noho ny teny avy tamin’ny vavan’i Jehovah. Nampanantena i Jehovah fa hikarakara azy ireo, ary izany tokoa no nataony. Nahita sakafo foana izy ireo isan’andro, ary tsy simba ny akanjony sy ny kapany. (Deot. 8:3, 4) Nampanantena koa i Jehovah hoe hikarakara antsika. (Mat. 6:33) Nikarakara ahy foana izy hatramin’izao, ka matoky aho hoe mbola hanao toy izany koa izy amin’ny herintaona.”
Mpitory 1 000 be izao no efa tonga teto. Nisy avy any Aotrisy, Espaina, Etazonia, Japon, Polonina, Porto Rico, Rosia, Soeda, ary Taïwan. Mpanitatra faritany avy amin’ ny firenena 30 koa izao no miaraka amin’ny fiangonana miteny anglisy, espaniola, italianina, kreôla fampiasa any Haïti, rosianina, sinoa, ary Tenin’ny Tanana Amerikanina. Manahaka ny apostoly Petera izy ireo, ka milaza hoe: “Izahay efa nahafoy ny zava-drehetra ary nanaraka anao.”—Mar. 10:28.
Be ny Vokatra.—Mat. 9:37
Mpitory 1 000 eo ho eo, avy any amin’ny tany 30, no mitory amin’ny fiteny samihafa eran’ny Repoblika Dominikanina. Afaka mitory amin’ny fiteny iray amin’ireto ve ianao?